Banyere anyị Apicmo cdmo Nsukka
APICMO bụ onye na-azụ ahịa ọgwụ na nkwekọrịta R & D.
APICMO nwere otu ndị R & D siri ike na ndị ọkà mmụta sayensị nwere ahụmahụ - Dr. Zeng zhaosen. Anyị nwere nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ụlọ ọrụ azụmahịa. Ndị APICMO na-elekọta ndị otu na-esite ná mba ndị mepere emepe dịka United States, Europe na Japan. Ihe karịrị afọ 10 nke ụlọ ọrụ na-ahụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ọgwụ. Mgbe ihe karịrị afọ iri nke nchịkọta ahịa, APICMO nwere isi ihe dị mkpa nke imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ọgwụ.
APICMO na-etinye aka na nchekwa nke akụ ọgụgụ isi nke ndị ahịa ya. Tụkwasị na APICMO bụ usoro nchedo akụnụba nke siri ike, APICMO emeela ihe ndekọ dị mma iji na-atụle atụmanya ndị ahịa nke ICH. Ndị APICMO si n'aka obere ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọgwụ ndị na-emepụta ihe na-emepụta ọgwụ na-emepụta ọgwụ na ụwa, na ụlọ ọrụ ndị na-emepe emepe dị ka China na India. A nwalere ọrụ APICMO na ngwaahịa dị iche iche site na ntinye aka na ngwa azụmahịa.
"APICMO bụ ISO 9001: 2008 kwadoro ya na ọrụ ya niile na-arụsi ọrụ ike na njedebe nke njikwa mma ụwa."
Onye isi nke APICMO
R & D OWU
inye usoro mmepe, mmezi nke mmepụta ihe, mmepụta ihe na ọrụ ndị ọzọ maka nchọpụta ọgwụ na mmepe ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọgwụ.
Ndị APICMO na-elekọta ndị otu na-esite ná mba ndị mepere emepe dịka United States, Europe na Japan.
APICMO na-enyekwa nkwado nkwado usoro, ọmụmụ ihe dị mma, nchọpụta na-adịghị ọcha na nkwụsi ike iji zute ihe ndị chọrọ IND na NDA.
APICMO na-achọ imeziwanye usoro ma belata ụgwọ maka ndị ahịa anyị. Anyị eguzobewo otu netwọk mara mma na nke a pụrụ ịdabere na ya nke ndị na-emepụta Chinese na China iji nye ọrụ na ịzụ ahịa dị irè ma dị irè.
Omume nke usoro nchịkwa mmadụ
APICMO bụ akara mmeri nke API, ụlọ ọrụ CMO.
AIMS BY AHARATORIES AWARDS
NKỌKWỤKWỌ N'ỌZỌ KWESỊRỊ ỤBỌCHỊ
Ụlọ ọrụ nkwonkwo 5 na 5 mahadum ndị a ma ama na China. Mahadum Sichuan, Mahadum Ocean nke China, Mahadum Changzhou, Mahadum Hunan na Sayensị na Nkà na Ụzụ, Institute of Chemistry, Ụlọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka Ọmụmụ Sayensị China (ICCAS)
Onye uzo: site na kilogram ruo otu narị kilogram.we nwere otu ndị na-emegharị ọchị nke ndị òtù 10 na-achịkwa nchọpụta ahịa n'ozuzu ha na ụdị ngwaahịa dị iche iche yana nchọpụta n'ime ndị ahịa China, nkọwa ngwaahịa, wdg.
APICMO juputara n'omume nke ndi mmadu
onye na-elekọta ọtụtụ ihe banyere ime ya.